China V-band clamp Manufacturer and Factories | Glorex
Ny tendon-drindrina anatiny dia miondrika ary amboarin'ny fomba manokana. Manana endrika famolavolana lohataona tsy manam-paharoa io. Taorian'ny fihenjanana anatiny dia mihodinkodina ary mifangaro mba hahazoana antoka fa ny hose dia afaka mifikitra tsara eo ambanin'ny fiovaovan'ny elastic sy ny toe-draharaha miasa sarotra. Maharitra sy maharitra.
Boaty baoritra sy fitoeran-kitay hazo.
Izy io dia ampiharina amin'ny takelaka sivana, milina maotera matevina, rafitra turbocharging, rafitra famafazana ary fampiharana indostria mitaky fangalarana flange (fifandraisana haingana sy azo antoka ho an'ny flange).
Ampiasaina mampifandray ny fivoahana amin'ny turbocharger sy ny fantsom-baravaran'ny fiara. Raha mamaha ny fametahana mafy dia miteraka ny supercharger ary mihoa-peo ny fikovotsoana na manimba ny fihenan-tsasatra.
Manaraka: Ny clamp amin'ny karazana bay